Shina Light Pole mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole
Manolotra vokatra marobe vita amin'ny vy izahay: faritra, làlan-dàlambe, poleta avo lenta ary hazavana fanaingoana; fizarana fitaovana sy poleta-fifamoivoizana; tsato lasa natao.
Ny tsanganana maivana dia vita amin'ny vy vita amin'ny kilasy Q235 / Q345 / A36, mifanaraka amin'ny fenitra BSEN40 / ASTM A 123 eo ambanin'ny alàlan'ny rafitra ara-kalitao ISO 9001.Ny tsangambato dia miaraka amin'ny spigot mounting, tondra-drano miroborobo, fandaminana fananganana haingon-trano ary highmast.
Lealite standard light pole, izay manohana ny luminaire miaraka amin'ny rivotra 0.20mÂ², dia tsy hihoatra ny halavan'ny tendrony avo noho ny 5% ny haavony avo ambonin'ny tany rehefa iharan'ny tsindry rivotra maherin'ny 500 Pa. azo ampiharina ny fitambaran'ny rivotra mahery indrindra.
Mba hahafahana mameno ny fangatahana, feno miaraka amin'ny seranan-tsambo sy ny lalamby DIN ho an'ny mpandeha circuit miniature, dia homena ary hapetraka amin'ny bolt iray aorina amin'ny varavarana misokatra.
Ny bao maivana ho an'ny fampidirana mivantana amin'ny tany dia homena baseplate goavam-be 300x300x1.6mm feno miaraka amina goavam-bolo vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy dipoavatra. Ny tsatoka miorina amin'ny base dia hanana takelaka miendrika haingam-pandeha mafana izay azo averina mankany amin'ny fototra iray izay natao hiatrehana ny hery hiaina amin'ny serivisy.
Street jiro pole ara-teknika fepetra takiana: Ny hahavony ny ny pole dia 4-15 metatra. The pole dia nanao ny Q235 kalitao avo vy. The savaivony ny ny pole dia 60-120mm, ny savaivony dia 132-290mm, ny rindrina hateviny dia 2.3-6.0mm, ary ny flange dia 240 * 240mm. 400 * 400mm, ny mahazatra fomba dia manga.
Hot mandroboka nandrisika Q235 vy amin'ny epoxy snaatana, tsy misy harafesina, tsy misy fade,tsy misy famnaetana na peeling in 30 taona mnae.
Buy Light Pole nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Light Pole ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Light Pole Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.